Iindaba - Uyikhetha njani ibrashi yamazinyo
Okokuqala, xa uthenga ikomityi yokuhlamba umlomo, kuya kufuneka unike ingqalelo uyilo olusebenzayo lwebrashi yamazinyo, echazwe kula manyathelo mathathu alandelayo.
Okokuqala, kufuneka sinikele ingqalelo kuyilo loyilo lwebrashi yamazinyo, enje ngoyilo olumilise umtshangatshangiso, olingana nomngxunya womlomo ngcono kwaye unokucoca amazinyo ngcono.
Inyathelo lesibini ikakhulu unyango lweenwele ezithambileyo zebrashi yamazinyo, ezinje ngeenwele ezixineneyo ezithambileyo, ezinokuthi zikhusele izinyo ngalinye ukunciphisa isiphumo sokuzalela ibacteria.
Inyathelo lesithathu lifuna ukujongana neenkcukacha zokuphatha ibrashi yamazinyo, njengokuvulwa kweminwe yi-ergonomic, nokuba umbala webrashi yamazinyo ugcwele kwaye uqaqambile.
Kwinyathelo elilandelayo, kufuneka sinikele ingqalelo kwiimfuno zebrashi yamazinyo, nokuba ibrashi yamazinyo ethambileyo, ingaba intloko yebrashi ikhuselekile kwaye iyahlangabezana neemfuno zokufumana ibakala lokutya, nokuba ngaba ukupakisha kwezempilo kuqinisekisiwe. Kwangelo xesha, kuya kufuneka unikele ingqalelo kwibhrashi yamazinyo, njengokunyanga unyango kunokukunciphisa ngokufanelekileyo ukucaphuka kweentsini kwaye ufezekise umphumo wokugcwaliswa ngokugcwala komlomo, nokuba umva wentloko yebrashi ikwanomsebenzi wokucoca. Kuyimfuneko ukuba unike ingqalelo kwimveliso yebrashi yamazinyo, enje ngezinto, umbala, ukusebenza kakuhle, umgangatho weebristles, ubungakanani, njl njl.
Okokugqibela, zininzi iindlela zemibala yeebrashi zamazinyo. Xa ukhetha ibrashi yamazinyo, kuya kufuneka ukhethe enye ngokokukhetha umbala wakho kunye nezitayile ozithandayo, kwaye ekugqibeleni ukhethe ibrashi yamazinyo oyithandayo.